Creative Writing » ကျွန်မ၏ ဖယောင်းရုပ်လေးများ	24
naywoon ni says: ငင်​ ​မောင်​နီ ​မောင်​နီ နဲ့ နာ့​စောင်း​ရေး​ထားတယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ၇တန်း ၈တန်း ဆို အရွယ် အရ ပြောရခက်မှာပဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်.. စာအုပ်များများ ဝယ်ထားပေးဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်…
ရွှေတိုက်စိုး says: ကျွန်တော်ထင်တာကတော့လေ… ကလေးတွေရဲ.ဘ၀ကို ပုံသွင်းထုဆစ်ဖို.ထက် သူတို.ကိုယ်သူတို. ထုဆစ်ပုံဖော်တတ်အောင် လမ်းကြောင်းခင်းပေးဖို.ပဲလိုတယ်ထင်တယ်….
လုံမလေးမွန်မွန် says: မတွေ့တာကြာပေါ့.. တိုက်တိုက် .. အံစရာ ဒက်ဒီခေါ်လို့ ပတ်ပြေးနေသလား.. ဟုတ်… သူတို့ကို လမ်းကြောင်းတစ်ခု ချပေးရမှာ.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချပေးတဲ့လမ်းကြောင်းက သူတို့နဲ့ မကိုက်သွားမှာ စိုးတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: လမ်းကြောင်းခင်းပေးတာအကောင်းဆုံးပေါ့ ဆက်လုပ် မွန်မွန်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်ကဲ့… သူတို့နဲ့အနီးကပ်နေပြီး လမ်းကြောင်းတစ်ခု ချပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်..
manawphyulay says: ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုပြင်ပေးချင်တဲ့ လူကြီးစိတ်ကလေးရှိနေတာပဲ။ ဆက်လုပ် ကလေးမလေး….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်ကဲ့.. just trying ပါပဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: ပြောရရင်
အောင် မိုးသူ says: မာဃလေးကတော်လိုက်တာ။ အရမ်းတော်တယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အင်း..သူတို့လေးတွေ စာအုပ်ဖတ်ချိန်ရှိအောင်လည်း လုပ်ပေးရဦးမယ်…
Alinn Z says: မင်းသားမဖြစ်လည်း ဘီလူးရုပ်ဖြစ်မယ့်အခြေအနေဆိုရင်
”သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ”လို့သာ အော်လိုက်ချင်. . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: “ကျွန်” ဖြစ်တာ ကမှ ကြိုးစားရင် သခင် ဖြစ်ဦးမယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: နာ့ခေးတွေကို အတတ်ကောင်းတွေ သင်ပေးနေတယ်.. ဝက်စုတ်… အစွဲကြီးတယ်ပဲပြောပြော… ကျွန်မ ဆိုတာလေးပဲ သုံးချင်တယ်…. သတ်ပုံအသစ်မထွက်မချင်းပေါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ရေးထားတာလေးက ကောင်းလိုက်တာ …
မြစပဲရိုး says: . မောင်အံ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ယူမယ် .. ယူမယ် .. အရီး ..
lamin ngel says: မလုံမလေးရေတတ်သလောက်မှတ်သလောက်လေးဝင်ပြောကြည့်မယ်နော်။ စာအုပ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့အတွက် အကောင်းဆုံးပုံသွင်းဆရာတွေပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလေး ဖန်တီးပေးကြည့်ပါလား
မြစပဲရိုး says: . ပြောရရင် ဒီ ကလေး နှစ်ယောက် (နောက်ဆို မောင်ဖြူ့ ညီလေးပါ ကြီးလာကချိန်ကျ ) သုံးယောက် ကို ရေရှည် ထိန်းကျောင်းဖို့က လုံမ မှ မဖြစ်နိုင်တာ။
PS – အရီး က တစ်ခါတစ်ခါ နဲနဲ စက်ရုပ်ဆန် တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: လုလု ထင် တယ်
padonmar says: ဘ၀မှာ တခါတလေတော့ ကိုယ်လုပ်သလို မဖြစ်တာတွေလည်း ရှိတယ် ။အဲဒါလေးတော့ ကြို တွက်ထားနော်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ကောင်းလိုက်တဲ့စာမူလေး။ နောက်မှပြန်လာမယ်